Ananya Dance Theatre waxqabadka Roktim, sumcadda sawirka: Paul Virtucio
Ujeeddada Barnaamijka: Kordhi hal -abuurka, awoodda, iyo hoggaaminta fannaaniinta shaqeeya ee Minnesota iyo kuwa dhaqanka haya.
Fanaaniinta Minnesota iyo dadka dhaqan -dhaqameedka ah ayaa ka caawiya McKnight Foundation inay fuliso hadafkayaga si loo hormariyo mustaqbal aad u cadaalad badan, hal abuur leh, iyo mustaqbal aad u tiro badan oo ay dadku iyo meeraha ku noolyihiin. McKnight wuxuu dhaxal u leeyahay hogaaminta fanka Minnesota, taageerada fanaaniinta shaqeeya ayaa had iyo jeer udub dhexaad u ahayd bixinta deeqda fanka.
Sannadka 2021, ka dib markii la bilaabay geedi socod dib -u -cusboonaysiin istiraatiiji ah oo ansixiyay horumarka barnaamijka oo ku dari doona ka -qaybgal joogto ah oo lala yeesho la -hawlgalayaasha bulshada, guddiga agaasimayaasha McKnight iyo kooxda ayaa weli diiradda saaraya sidii loo xoojin lahaa dadka awoodda u leh hannaanka hal -abuurka ee Minnesota - fannaaniinta shaqeeya iyo kuwa dhaqanka haya. Waxaan aqoonsannaa qaababka tirada badan ee farshaxan -yahannada iyo dadka dhaqanku ay iftiimiyaan waaya -aragnimada, dhiirrigeliyaan farxadda, muujiyaan kala -duwanaanshaha dhaqammada bulshooyinka, iyo hor -u -marinta caddaaladda -kobcinta firfircoonaanta iyo firfircoonida dawlad -goboleedkeenna. Barnaamijka Farshaxanka & Dhaqanka ee dhowaan la magacaabay ee McKnight wuxuu rumeysan yahay in Minnesota ay horumar sameyneyso marka dhammaan fannaaniinteeda iyo dadka dhaqankeeda ay horumar sameeyaan.
Taageeradayada aan u leenahay fannaaniinta shaqeeya ee Minnesota iyo dadka xambaarsan dhaqanka, waxaan ku talo jirnaa inaan isticmaalno qalab adag si aan u gaarno hadafkayaga, oo ay ka mid yihiin deeq -siinta iyo wehelnimada, saamaynta maal -gelinta, wargelinta siyaasadda, saamaynta samafalka, cilmi -baarista, iyo wada -shaqaynta xoojinta.
Barnaamijka Farshaxanka & Dhaqanka wuxuu maalgeliyaa ururada ku kala duwan farsamooyinka farshaxanka iyo dhaqamada dhaqanka. Wada -hawlgalayaashayaga deeq -bixiyeyaasha ah ayaa bixiya dhismayaasha taageerada in la qalabeeyo oo awood loo siiyo farshaxan -yahannada iyo dadka dhaqan -dhaqameedka ah inay ku dhaqmaan, soo saaraan, oo hoggaamiyaan. Waxaan sidoo kale la shaqeynaa lamaanayaasha muhiimka ah si aan u bixinno lammaanayaal iyo dib -u -habeynta si loo taageero shaqsiyaadka farshaxanka shaqeeya.
Ku darsiga dhaqanka xambaarsan hadafkayagu wuxuu qirayaa in barnaamijkeenu taageero siinayo hoggaamiyeyaasha hal -abuurka ee Minnesota oo ka yimid dhaqammada aan ereyga adeegsan fanaan (sida Dhaladka Ameerika iyo Hmong), iyo sidoo kale kuwa udub -dhexaadka u ah gudbinta iyo ilaalinta hab -nololeedka dhaqanka.
2021 Samaynta Deeq-waxbarasho
Wararka Fanka & Dhaqanka, Fikradaha, iyo Khayraadka
Soo Baxayaasha DeAnna
Xiriirka Barnaamijka & Deeqaha
Maamulaha Kooxda Barnaamijka
[cinwaanka emailka ilaalinaya]LinkedIn